HEECHI TECH waxa ka go'an in ay badi dadka sigaarka cabba ay siiso wax soo saar caafimaad qaba iyo sigaar cabbista.HNB E-sigaarka waxa uu noqday wax soo saar cusub oo elegtarooniga ah,kaas oo aad iyo aad ugu soo badanaya caalamka.
HEECHI TECH waxaa la aasaasay 2015. Shirkadda waxaa ka go'an in ay cilmi-baaris ku sameyso HNB (Heat Not Guba), oo hadda waxay leedahay nidaam hanti maskaxeed oo dhamaystiran oo ku saabsan nidaamka kuleylku aan guban.
PURE HeeChi Blueberry, sanduuq ay ku jiraan midho cusub oo fartaada ah!blueberries la xushay ayaa lagu cadaadiyay hal qarax oo leh tignoolajiyada cuntada gees-goysa.Iyada oo leh caanaha dhirta gaarka ah, waxay jebisaa qaabka caadiga ah ee kulaylka dhadhanka leh waxayna keentaa khibrad miro la hagaajiyay.
Dhadhan macaan oo waxoogaa dhanaan ah blueberries cusub oo leh dareen reex ah.Doorashada ugu fiican ee midhaha-jecel, ku raaxayso khibrad siman oo raaxo leh oo miro casiir leh oo farahaaga ku jira!Dhimbiil dhiirigelinaya riyo-maalmeed ama duufaan maskaxeed.
Shirkaddu waxay rabta inay siiso alaab ka caafimaad badan iyo khibrad sigaar cabbista sigaarka.Waxaan bixin karnaa khadka wax soo saarka dabacsan iyo MOQ.Na dooro waxay ku siin doontaa faa'iido aad u weyn.Nala soo xidhiidh si aad u hesho muunad lacag la'aan ah oo dhoofin ah.
Hore: Hilibka tangerine-ka ee HEECHI aan-Nikotiinka ahayn HNB Herbal stick
Xiga: HEECHI Coffee aan ahayn nikotiinka HNB Herbal stick
Magaca Alaabta: HEECHI Blueberry Ushii aan Nikotiinka ahayn HNB Herbal